UkuSasazwa kweePix zeNtshukumo yoSasazo lweMveliso esekwe kwi-MTE2019 | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » Usasazo lwePixs lwasasaza lweMveliso esekwe kwiLifu eMTE2019
I-Chelmsford, Mass. -Septemba 18, i-2019-I-Broadcast Pix ™ iya kubonisa izisombululo zayo ezihlanganisiweyo zemveliso kwaye zikhokelele iiseshini zemfundo zasimahla kwimveliso esekwe lilifu kwiveki ezayo ngexesha leMedia Technology Expo. Umnyhadala wasimahla oveliswe sisisombululo soSasazo esiPhambili, isahlulo seKhowudi yeeNdaba eziPhambili, i-MTE2019 iqala e-Fremont Studios eSeattle ngoSeptemba 24, kwaye ishukumisela kwi-Leftbank Annex ePortland, Ore., NgoSeptemba 26.
Kuzo zombini iintsuku zomdlalo, uChuck Williamson ovela kwi-Broadcast Pix uza kuphanda ngenkqubela phambili yokulawula-i-IP eyenze imveliso esekwe kude isebenzise i-intanethi yoluntu. Umsasazi we-Pix Commander ™ uqhuba ngaphakathi kwizikhangeli ezixhaphakileyo zewebhu, enika amandla ulawulo lwescreen kuwo onke amabakala emveliso ephilayo, ukusuka kulawulo lwekhamera nokutshintsha kwimizobo kunye nokusasaza. Kudityaniswa namajelo osasazo e-Broadcast Pix ekhethekileyo ye-macros, imisebenzi emininzi kunye nezinto zemidiya zinokudityaniswa kunye kwaye zilawulwe ukusuka kwiqhosha elinye, ngokulula ukwenza i-UI.
Isungulwe kwi-2002, i-Broadcast Pix inikezela ngesixhobo esifanelekileyo sokwenza iinkqubo ezintle, zidityaniswa kakuhle kwaye zilula ukuyisebenzisa. Izisombululo zethu ezihlanganisiweyo zemveliso zibonisa ulawulo lobunikazi kunye neetekhnoloji ezizenzekelayo, kunye ne-BPNet ecosystem enikezela ngendleko ezisebenzayo, ezikhuselekileyo zenkonzo yefu lokukhusela, ukulawula, kunye nokusebenzisana. I-Pix yokusasaza iyazidla ngokuba noorhulumente ngaphezulu kwe-5,000, ukusasaza, umcimbi obukhoma, kunye nabathengi boonomathotholo kumazwe angaphezulu kwe-100. Funda ngakumbi kwi adspix.com.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa kwePix ulawulo lwe-IP UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli I-MTE2019 ukutshintsha kwemveliso Imikhonto kunye neentolo TVU Networks Injini yeVidiyo i-video switcher 2019-09-18
Previous: Ukuqeshisa kwiXesha leMisebenzi yokuSebenza / Umthwalo wemveliso / ukuThengisa nge-E-Commerce
next: Abahleli bemifanekiso yesandi eshukumayo (MPSE) ukuHlonipha uMhleli oPhetheyo / uMyili oYilwayo weCece ngeBhaso lokuFezekisa uMsebenzi